Shopping Mall များအတွက် roller Shutter တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Rolling Up ကိုတံခါး,ဆိုင်တံခါးကြိတ်စက် Shutter ဒီဇိုင်း,ဆိုင်ဘို့ roller Shutter တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး > Shopping Mall များအတွက် roller Shutter တံခါး
Shopping Mall များအတွက် roller Shutter တံခါး
ထွက်နိုင်ရေး: 300 Set/Sets per Month
ပွင့်လင်း Polycarbonate ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
crystal အမြင့်မြန်နှုန်း Rolling Up ကိုတံခါး - တံခါးကိုစာရွက်သို့ embedded တံခါးကိုကွန်နက်ရှင်အပိုင်းအစအဘို့အလူမီနီယံ profile များကိုအသုံးပြုခြင်း, Two-layer ကိုဖွဲ့စည်းပုံ, အထူးဒီဇိုင်း။
အသံတိတ်ခြေရာခံလူမီနီယံအလွိုင်း, Dual-slot ကဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုစကားပစ္စည်းကဒ်အထိုင်သို့ embedded နှင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်း: polycarbonate (PC ကို bulletproof ပလပ်စတစ်)
control system: 24V DC က, စကားအစစ်ဆင်ရေး, လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အကြမ်းခံခြင်းနှင့်အသက်ရှည်။ အတားအဆီး၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့တံခါးများပြန်ခုန်ထွက်သို့မဟုတ်ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရပ်တန့်များကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်။
တံခါးကိုဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို, အလင်းရောင်နှင့်အလိုအလျှောက်သုံးမိနစ် delay လုပ်ခြင်း; လာသောအခါပါဝါပျက်ကွက်, မပြတ်မတောက် power supply သည်အသုံးပြုသူများကို manual option ကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များဘို့ငါတို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါ။
--Virtually indestructible - extruded လူမီနီယံ, ကြံ့ခိုင်ရာသီဥတုနှင့်သံချေးအထောက်အထားအနေဖြင့်လုပ်ကြံ
polycarbonate ရှပ်တာနီးပါး indestructible အောင် glazing အတူ။
2 .. ဘယ်အရာကိုတံခါးများအတွက်အာမခံကော?
ငါတို့ရှိသမျှသည်တံခါးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် 12 လအာမခံပေး။ အစဉ်အမြဲအပြီး-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေး။
3. သင် OEM ဝန်ဆောင်မှုပေးသလား?
OEM & လိမ္မော်ရောင် Service ကိုကြိုဆိုကြသည်။
4. MOQ ကဘာလဲ?
1 pc ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအဖြစ်ပင်လယ်ကုန်စည်သို့မဟုတ်လေကြောင်းကုန်စည်များအတွက်သင့်လျော်သောသုံးထပ်သားအမှုသို့မဟုတ် Cardboard, ။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လျှပ်စစ် Crystal Shutter Rolling Up ကိုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Transparent Crystal Shutter Rolling Up ကိုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဒေါင်လိုက် PC ကို Transparent ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Crystal Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Rolling Up ကိုတံခါး ဆိုင်တံခါးကြိတ်စက် Shutter ဒီဇိုင်း ဆိုင်ဘို့ roller Shutter တံခါး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Roll Up ကို Shutter တံခါး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Roll Up ကိုတံခါးပေါက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Rolling Shutter တံခါး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Glass ကိုတံခါးပေါက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Transparent Shutter တံခါး